ဖရိုဇန် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Photography » ဖရိုဇန်	25
Posted by မြစပဲရိုး on Jul 5, 2015 in Photography | 25 comments
ခတစ် (ခရီရေးတစ်) ဓာတ်ဆာလေး မောင်ဂီ တစ်ယောက် ပန်း တွေ ကို မီးတင်ရှို့ထား တဲ့ ပုံ တွေကြည့်ပြီး သကာလ
သူ့အရီး ကွန်တစ်မြ လဲ ပန်း တွေ ကို ရေခဲရိုက်ချင်စိတ် ပေါ် ပြီး စမ်းကြည့်လိုက်ပါတယ်။
ပုံတွေကြည့်ပြီး ဂျယ်လီ စားချင်စိတ် ပေါ်သွားတော့တာပါဘဲ။
လာကွဲ့ နှစ်ရာ။ lol:-)))
Thanks Mr IZG. :-))
အေးအတူ နွေးအတူ နှိပ်စက်ခံ ပန်းလေးများ
@QUIL@ says: စနိုးဖလိပ်ခ် လေးဘာလေးနဲ့ ရိုက်ပါဗျာ..
(ရေစွတ်ပီး ရေခဲသေတ္တာထဲ ထည့် နည်းနည်းပျော်ချိန်ရိုက်)
ဘယ့်နှယ့် ခွက်ထဲထည့်နှစ်ပီး ရိုက်တယ်လို့…..
မီးရှို့တဲ့ ကိစ္စနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး မပြောဘာနဲ့ဗျာ…
အဲ့ကိစ္စ ကျော် …ဘီပီအိုင် ကို အကြီးကြီး စိတ်နာနေသဗျ..။
ကန်မစထွီရဲ့ အလိုတော် အရပြောရရင်တော့ မီသိုင်းအယ်လကိုဟောလ် မီးလောင်ရင်
ဘလူးဖလိမ်းမ် နဲ့ လောင်သဗျ။ (တကယ်လည်း ဘလူးဖလိန်းမ် လိုချင်ခဲ့တာ)
တကယ်တမ်း ဘီပီအိုင် အရက်ပျံစွတ်ပြီး ရှို့ကြည့်တော့ ပန်းက အပြုံးတောင်မပျက်ဘူး
(ဘယ်လောက်တောင် ရေရောထားတယ် မဆိုနိုင်)
အဲ့ဒါနဲ့ပဲ ဓာတ်ဆီနဲ့ ညားရရှာတဲ့ နှင်းဆီပါမောင်။
ဆက်တွေးကြည့်တော့ စိတ်မကောင်းစရာ ၀မ်းနည်းကြီး။
ဟုတ်တယ်လေ..။ အရက်ပျံကို ပိုးသေအောင် ပိုးသတ်ဖို့ သုံးပါတယ်ဆိုမှ
မဟားဒယား ရေရောထားမှတော့ ပိုးမသေတဲ့အပြင် အဲ့ထဲ ပိုးတောင် ဘယ်လောက် မွေးထားပြီး ဖြစ်မလဲမဆိုနိုင်။
ငယ်ငယ်က ဒူးပြဲလို့ အရက်ပျံယူထည့်.. ပုလင်းအဖုံး ပြန်မပိတ်ရင် အငွေ့ပျံပီး ကုန်တတ်တာမို့
လူကြီးတွေ ဆူတာဆဲတာ မကြာခန ခံရဖူးသပေါ့…။
အခုများတော့ အဖုံးမအုပ်ဘဲ ရေစင်အောက် မေ့ထားခဲ့တဲ့ အရက်ပျံပုလင်းက ၃ရက်ကြာမှ ပြန်တွေ့မိလို့ကြည့်မိတော့
လူကို စပ်ဖြီးဖြီးနဲ့ ပြောင်ပြနေသယောင် .. အထဲက အရည်က လက်တလုံးလောက်တောင် မလျော့ချင်။
အရက်ပျံတောင် စိတ်ချရအောင် ဖောရိန်းက ၀ယ်သုံးရမယ့်အပေါက်။
P.S နက်ဖြင် မဲစာရင်းနာမည်မပါတာ ပါအောင် သွားလုပ်မလို့…။
ဟိုအာလဖွားဂျီး တက်ရင် ဘလူးဖလိမ်းထွက်တဲ့ အရက်ပျံထုတ်ပေးမယ် ဂဒိပေးရင် မဲပေးမည်။
မြစပဲရိုး says: အရီးဂွ လို့ ဆိုလဲ ဆိုအေ။
ရှင့် အရီး က တစ်မျိုး။
သနားလို့ (ဒါမှမဟုတ်) ရွေးစရာမရှိလို့ ပေးလိုက်ရတာမျိုး ကို လုံးဝ မကြိုက်ပါ။
တစ်ခါ အဘနီ ကိုလဲ ပြောဖူးသေး။
. ဖွတ် အစား ခွေးအမြီးဖြတ်တင်ရင်တောင် ပေးကြမဲ့ မဲ တွေ ကို အားနာပြီး NLD မှာ တကဲ့ ဒေါင်ဒေါင်မြည် လူယုံကြည် အားကိုး နိုင်တဲ့ သမာသမတ် ရှိသူများ ကို ရွေးယူပြီး တင် ရမှာပါ။
. ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ရဲ့ ပါဝါ ကို မြင်ရမယ် မျှော်လင့်ပါတယ်။
အမတ် ဆိုတာ ပညာချည်း ထိပ်တန်းရောက်နေလို့ မပြီး၊ လူ ကလဲ သိဦးမှ။ မြန်မာပြည် က ဒီ လို မျိုး မို့ အတော်တော့ စီစစ် ရမှာ။
တကယ်တော်သူ လူသိရှင်ကြား ပုဂ္ဂိုလ်များ NLD ကို ပံ့ပိုးကြဖို့ လိုနေပြီ။
NLD အတွင်း လူများကလဲ တိုင်းပြည်အတွက် ရုန်းထွက်ဖို့ အားလိုချိန်မှာ အပြန်အလှန် လေးစားမှူ နဲ့ နားလည်ပေးနိုင်တာ ပို အရေးကြီးမလားဘဲ။
ရေခဲရိုက် ပန်း ကတော့ အခိုင်လိုက် ကို ပလပ်စတစ်ထဲ ပုံဖော်ထည့် ခဲဖို့ နေရာ မဆန့်သေးလို့။
. နောက် ထပ် ရိုက်ဦးမှာ။
မစွမ်း တော့ တဲ့ စပရစ် လောက် ကတော့ ကလေး ရယ်။
.ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တက်မှ မဟုတ်။
တကယ်ဘဲ ဒီလောက် ဆိုးရင် ပစ္စည်းထုတ်တဲ့ ကမ်ပနီ ကို သွားပြီး ကွန်ပလိမ့် သင့်တယ်။
ဒီလို အတုနီးပါး ထုတ်ကုန်တွေ ကို စာရင်းလုပ်ပြီး ထား။ နောက် စားသုံးသူများ ကာကွယ်ရေး အဖွဲ့ ဆိုလား။ ကြားဖူးတာ။
အဲဒီ မှာ သွားပို့။ ဒါဆို လူလည်မကျရဲတော့ဘူးပေါ့။
Alinsett @ Maung Thura says: .ပန်းလေးတွေခမျာ… တနားပါတယ်.. မီးရှို့တဲ့သူနဲ့
.တော်သေးတာက…ပန်းတွေထဲ… ဖြူဖြူ ဖွေးဖွေး ပန်းကလေးတွေ မပါသေးလို့.. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8068
မင်းလဲ လေ ထိပန်းဆိုပြီး ပန်လာမှုတ် ရိုက်ကွယ်။
မင်းကျ ပန်း ဖြူဖြူဖွေးဖွေး ကို သုံးပေါ့။ lol:-))
Mike says: .မြစာကလေးတို့ လုပ်စားချက်က ၉လောက်ချိတယ်..သဂျီးမာမွတ်လျှာပွတ်တော့ငိုမဲ့မဲ့ဖစ်နေရှာဘီ..ငိငိ
.ပန်းကလေးတွေကို မတရားနှိတ်စက်နေရင်အရေးယူတဲ့အုပဒေ လွှတ်တော်မှာပြဋ္ဌာန်းပေဖို့ အဆိုပြုပါသီ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8068
မြစပဲရိုး says: ဟိ ဟိ
. ဒီ မြွေ ကို ခြေမြင်တယ်လား။
ရှင်က နှေးတယ် ဗျာ၊ လုပ်စမ်းပါ မြန်မြန်လေး။
ဒီ သူကြီး ဒီ တစ်ချီ သမိုင်းတွင်ပြီး အီ သွားအောင်လို့။ သူ့ရဲ့ ဘတ်ဂျက် စွမ်းရည်၊ Business planning ကိုလဲ သိရမှာပေါ့။ မမ က လဲ သူ့ နေ့စဉ် အကြောင်း တွေ စာဖွဲ့ တင်တာ ဝုတ်ဘူး။
. ပြည့်ခါနီး ကို။ lol:-)))))
kai says: Possible Hard Drive Failure Soon.
S.M.A.R.T. disk error detected.
IMPORTANT: Potential hardware problem detected.
Your system’s smartctl utility detected errors. (see the attached file for details). For more information about those errors, read the smartctl manual page, the documentation at http://smartmontools.sourceforge.net/, and the developers’ mailing list.
To disable this check, execute the following command as the root user:
To re-enable the check, remove that file. If you do find issues, we suggest that you use smartd to monitor your drives, in addition to or instead of this script.
Since this is notasoftware-related issue, contact your datacenter or hardware manufacturer for further assistance.
—- smartctl report preview —
ATA Error Count: 31 (device log contains only the most recent five errors)
Error 31 occurred at disk power-on lifetime: 20311 hours (846 days +7hours)
Error 30 occurred at disk power-on lifetime: 20311 hours (846 days +7hours)
Error 29 occurred at disk power-on lifetime: 20311 hours (846 days +7hours)
Error 28 occurred at disk power-on lifetime: 20311 hours (846 days +7hours)
Error 27 occurred at disk power-on lifetime: 20311 hours (846 days +7hours)
This notice is the result ofarequest from “smartcheck”.
This notice was generated on “Sunday, July 5, 2015” at “10:08:23 AM UTC”.
မြစပဲရိုး says: Well … I am so sorry to hear that good news. :-)
jk… :-(( Sometimes that happned when the smartcheck utility was upgraded.
You should see CHANGELOG.
But the safest way to choose is to ask someone who is an expert in that field.
Hello My dear Server …
Please wait for me to reach hundred thousand points.
Listen to me … I love you… :-))))
kai says: ဟုတ်ဟုတ်..မဟုတ်ဟုတ်..
ဆာဗာဆြာတွေကတော့.. လဲဆို..အလုံးလိုက်လဲပေးပြီး.. တစ်ကပြန်စရမယ်ပြောပါကြောင်း…
လိုရမယ်ရ… ဒေတာတွေ Backup လုပ်ပြီး.. နောက်တလုံးကိုရွှေ့နေပါကြောင်း…။
Was this answer helpful?LikeDislike 2714
ကထူးဆန်း says: အရီး
သတိ.. သူကြီးက နောက်ဆုံးကျမှ သူ့ rule ကြီး ထုတ်ပြမယ်ထင်တယ် နော့်..
နိုင်ငံခြားနေသူ တွေကို ပေးဘူးဆိုတာ..
ခုထိ အာဏာစက် တည်နေသေးလားတော့ သိဝူး……
အဲ့လာ သတိပေးတာ ..
ဇီဇီခင်ဇော် says: ပေါပါ့ လိုက်။
စာရင်း အရ ရပြီး ပိုက်ပိုက် မရနိုင်တဲ့ အကြောင်းးးး
မြစပဲရိုး says: ဟိ … သိပါ့။ Rule တွေ က အလွတ်ရပါတယ်။
လိုချင်ရင် မရ ရ အောင် အတင်း ဇွတ် တိုးတတ် တဲ့ အကျင့်က မပျောက်သေးလို့။
. ပွိုင့် တွေ ကို တစ်ခြားပို့ရမလားလို့ ။ အခုတော့ ဒင်း က ဆာဗာ စကားခေါ်နေပြီ။
. နောက်ဆုံးတော့ ကိုယ့် အိတ်ထဲ ကိုယ်ပြန် ဖိတ် ရမဲ့ ကိန်းဘဲ။ :-)))))
မြစပဲရိုး says: အလိုလေး
ဘူတုန်း … အရီး ဆိုတာ။
. ကျွန်မက မြ ပါ မောင်။ ဟိ။
ရှင်တို့ သာ မသိတာ။ ရှင်တို့ သူကြီး က သိတယ်။
ကျွန်မ point တွေ တစ်ခြား မလွှင့်စေဘဲ သူ့ ဆာဗာ ကြီး ဆီ ရောက်အောင် တွန်းနေပြီ။ lol:-)))
BTW – တစ်သီးပုဂ္ဂလ အတွက် မဲ ဆွယ် ဖို့ လိုရင် မြ ကို သတိရပါ။
Was this answer helpful?LikeDislike 2282
Ma Ei says: အဲ့ဒီ ပန်းပွင့်ရေခဲတုံးလေးတွေ
မြစပဲရိုး says: သများ လဲ အဲဒီ စိတ် ဖြစ်သွားပြီး နဲနဲ မြည်း ပြီး ရေခဲတုံးကို ကိုက်စား လိုက်သေး။ :-)))
တောင်ပေါ်သား says: ရိုက်လည်း ရိုက်တတ်ပ အရီးရယ်
Ma Ma says: စက်ရက်လိုက်ကြတာ… အဲ ရက်စက်လိုက်ကြတာ။
ဒီတစ်ခါကြတော့ ပန်းလေးတွေကို ကြိုး နဲ့ သီပြီး ရိုက်
မြစပဲရိုး says: ကိုမျိုး – သင်းကျူး။
ချစ်မမ – ဗာလနံ နဲ့ ပေါင်းတော့ ဗာလနံ ဖြ စ်။
ကပေါက်ကြီး – စမ်းကြည့်မယ်ဗျာ။ :-)))
ဇီဇီခင်ဇော် says: ဪ။ မြ။ မြ။
ပြီးရင် အလှူအတွက် အမျှ ဝေပြီး သာဓု ခေါ်ရတော့မယ် မြရယ်။
​ဒေါ် လေး says: တတ်လဲ တတ်နိုင်တဲ့ အရီး
မြစပဲရိုး says: Thanks Daw Layy. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 2394
မြစပဲရိုး says: ဟိ ဟိ ဟိ။ ပါးစပ်ပိတ် ရတော့ဝူး။
. ကျေးဇူးဘဲ အစ်မအေး။ :-))
အောင် မိုးသူ says: ရေခဲလေးထဲမှာဆိုတော့ လှတော့လှသား